गरे के हुन्‍न ? - Punhill Onlineगरे के हुन्‍न ? - Punhill Online
२४ फाल्गुन २०७६, शनिबार १७:३० मा प्रकाशित (4 हप्ता अघि)
गत फेब्रुअरी ७ तारिख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँग टेलिफोन वार्ता गर्दा भने, ‘चीनले ज्यादै छोटो समयमा विशेष अस्पतालको निर्माण गरेको छ, जसले चीनको उत्कृष्ट क्षमताप्रति गहिरो छाप परेको छ।’ चीनमा कोभिड-१९ को भयावह स्थिति चल्दै गर्दा अमेरिका त्यही मुलुक थियो जस्ले ठोस वस्तुगत सहयोग नगरेर चर्को टीका टिप्पणीका साथ चीनलाई हतोत्साहित गरिरहेको थियो। यो फोनवार्तापछि ट्रम्पले चीनप्रतिको रवैया फेरे र सहयोगका लागि वातावरण बनाए।
भौगर्भिक रूपमा उच्च जोखिममा पर्ने चीनले चमत्कारकै शैलीमा बारम्बार प्रमाणित गरेको छ कि गरे जे पनि संभव छ। यतिखेर कोरोनाले चिनियाँ जीवन तहसनहस बनाइरहेको छ र नजाने कहिलेसम्म डावाँडोल बनाउँदै जाने हो। तर संकटको घडीमा पनि चीनले जुन ढंगले १ अर्ब ४० करोड जनतामा सहजै राहतको अनुभूति गराउन सकेको छ, त्यो कुनै पनि देशका लागि अनुकरणीय विषय हो। भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अन्तर्गत पूर्वी एसिया अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख श्रीकण्ठ कोन्दापाली भन्छन्, ‘रोग प्रतिरोध सम्बन्धी चीनको कदम एकदमै तीव्र रहेकाले अन्य मुलुकका लागि सिक्न लायक अनुभव हो।’
१०/१२ दिनमै अस्पताल– जनवरी २४ तारिखदेखि दिनरात नभनी ४ हजार कामदारले दुई शिफ्टमा खटिएर १० दिनमै ‘हो शन शान’ अस्पताल बनाइभ्याए। सन् २००३ मा बेइजिङमा एक सातामा स्याउथाङशान अस्पताल बनाइएको थियो। त्यसको १७ वर्षपछि, कोरोना भाइरसविरूद्ध लड्न चीनले गत फेब्रुअरी २ तारिखमा १ हजार शैय्याको अस्पताल बनायो।
यो अस्पताल निर्माणाधीन छँदा जनवरी २६ तारिखदेखि शुरू भएको ‘लैशनशान’ अस्पताल पनि १२ दिनमै निर्माण सम्पन्‍न भएको हो। ७९ हजार ७०० वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको सो अस्पतालमा १६ सय शैय्या क्षमता छ भने २ हजार चिकित्सकले काम गर्न सक्छन्। फेब्रुअरी ८ तारिखदेखि यसले बिरामीलाई सेवा दिन थालेको हो।
चिकित्सा स्रोत – बिरामीको चाप बढेपछि चिकित्सकहरूको परिचालन अपरिहार्य थियो। चीनमा प्रान्त प्रान्तबीच एउटा हार्दिक सहकार्यको भावना छ। यहाँ एउटा प्रान्तले अर्को प्रान्तलाई सहयोग गर्छन् र एकअर्काको उत्थानका लागि सहकार्य गर्छन्। कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्या दिनप्रतिनदिन उक्लिरहेको बेला सानोतिनो जनशक्तिले भ्याउनेवाला थिएन। चीनका अनेकन प्रान्तबाट टोली टोली बनाएर स्वयंसेवी रूपमा चिकित्साकर्मीहरू खटिए। अस्पतालमा व्याप्त सर्वसाधारणको कोलाहलका बीच कुनै डाक्टरले खाने, बस्ने सुविधाको गुञ्जायस नगरिकनै सेवा दिइरहेका छन्।
लक डाउन– यदि चीनले बेलैमा सम्पूर्ण क्षेत्रहरू ‘लक डाउन’ गर्न नसकेको भए अहिले वुहानको महामारीले सारा चीन क्षीण भैसक्थ्यो। १ अर्ब ४० करोड जनसंख्यालाई यथास्थितिमा सीमित पार्नु सहज कुरा होइन। चीनमा निर्माण गरिएका घरआवासको संरचनाले पनि यो संभव भयो। ठूला आवास क्षेत्रमा भएका कम्पाउण्डका ढोकाहरू बन्द गरेर निश्चित ढोकाबाट आवतजावत गर्ने र गेटमै आउने जाने मानिसको हाजिरी राख्ने, तत्कालै सबैतिर सूचना प्रवाह गर्ने छरितोपना उदाहरणीय छ। यसैकारण अहिले कोरोना भाइरसलाई साँघुरो घेरामा सीमित गर्न सकिएको छ। सर्वसाधारणलाई विश्वस्त तुल्याउन सकियो भने यो पनि असंभव काम होइन रहेछ।
बजार आपूर्ति– कोरोनाका कारण वुहान सहर जनवरी २३ तारिखदेखि ‘लक्ड डाउन’ भयो। यसको संचार विश्वभरि भयो। वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरसको प्रतिरोधका लागि मास्क महत्वपूर्ण हुने कुरा सुझाए। लगत्तै बजारमा मास्कको अभाव हुन थाल्यो। नेपाल घुम्न गएका केही चिकित्साकर्मी र अन्यले पनि हज्जारौं मास्क किनेर कोरोना प्रभावित क्षेत्रका अस्पताललाई हस्तान्तरण गरे। कतिपयले आफ्नो लगेजका कम महत्वपूर्ण सामान मिल्काए र मास्क भरेर चीन फर्किए। विश्वका विभिन्‍न ठाउँमा भएका चिनियाँले मास्क लगायत स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक सामग्री चीनमा पठाए। चौबीसै घण्टा रमझम हुने विशाल चीन नै एकाएक ठप्पजस्तै भयो। सडक सुनशान भए। बजारमा मानिसहरूको भीड शून्यजस्तै भयो। सुपरमार्केटहरूमा सामग्रीहरूको अभाव देखिन थाल्यो। तथापि अपेक्षा छ, महामारी छिट्टै अन्त्य हुनेछ। केही समयका लागि मितव्ययी बनूँ। तर बजार मूल्य र नियन्त्रण राखेर जनताको असन्तुष्टी चुलिन नदिनु सानो खतरा टार्नु होइन।